Tababaraha Arsenal Oo Ka War-warsan In Ay Kooxdiisu Ciyaaryahano Iibsan Kari Waydo – Cadalool.com
Tababaraha Arsenal Oo Ka War-warsan In Ay Kooxdiisu Ciyaaryahano Iibsan Kari Waydo
Tababaraha kooxda Arsenal Unai Emery ayaa shir jaraaid oo uu qabtay ka hor ciyaarta ay bari la leeyihiin kooxda West Ham United horyaalka Premier League.
Unai Emery ayaa ka hadlay arimo badan oo ay ka mid yihiin xaalada kooxda iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyada ee imika furan oo ilaa hada ay kooxda Arsenal aad moodo in ay ku dhego barjawday.
Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa waxa ay u dheg taagayaan laacibiinta ay kooxdoodo la soo wareegto ayaa macalinka kooxdu uu sheegay in ilaa hada aanu u sheegi Karin cida ay la soo wareegayaan iyo isagoo sidoo kale sheegay xataa in isagu uu walaac ka qabo in kooxdu ay keento ciyaartoyo tayo leh taasoo ka cadhaysiisay dhaman taageerayaasha arsenal ee ku kala sugan daafaha aduunka.
Macalinkan Reer Spain ayaa waxa uu yidhi “ ma ogi in aan heli karno saxeexyada ciyartoyada imika diyaarka ku ah suuqa kala iibsiga balse waynu arki doonaa hadii aanu samayno”.
Isagoo sidoo kale sheegay in ugu yaraan uu bal ku dedaali doono in uu helo ciyaartoyada amaahda ah ee diyaarka ah balse aanu boqolkiiba boqol ku niyad samayn in uu heli doono ciyaaryahan kasta oo kooxdu u baahan tahay, halkaana waxaa laga akhrisan karaa in maamulka kooxdu ayna ogolayn in wax lacag ah ay ku bixiyaan suuqa kala iibsiga si ay kooxdu ugu soo noqoto dhabadii guusha.
Isagoo diiday in uu ka jawaabo in uu balan qaado ugu yaraan hal ciyaaryahan oo imika kooxda imanaya si taageerayaasha kooxduna ay u helaan dhiiro galin, wuxuuna ka gaabsaday in uu been u sheego taageerayaasha kooxda wuxuuna ku soo gabagabeeyey in uu eegi doono bal sida ay wax walba u dhacaan.